Kuo, miverena amin'ny entana ary amin'ny iPad mini | Vaovao IPhone
Ny tsaho momba ny vokatra Apple vaovao dia avy any Ming-Chi Kuo hatrany. Ity mpandalina Apple fanta-daza ity dia manazava amin'ny tsaho farany fa ny orinasa Cupertino dia mieritreritra ny hametraka modely mini iPad vaovao amin'ny tapany faharoa amin'ity taona ity.
Araka ny fantatsika rehetra, ny orinasa Cupertino dia nanangana ny maodely iPad Pro tamin'ny volana aprily lasa teo, saingy navelany ny maodelin'ny iPad sisa ka tsy hahagaga raha eo afovoan'ity 2021 ity ihany dia handefa andian-vokatra vaovao izy ka ao ny iray amin'ny iPad kely.
tokoa Mpampiasa maro no tsy hahita ity iPad kely ity ho mahasoa, fa misy maro hafa izay manao izany Toy ny amin'ny iPhone, ireo maodely madinidinika dia mazàna mahita fahombiazana eo amin'ireo mpampiasa, noho izany dia tsy hahagaga raha nandefa an'ity mini iPad vaovao ity ny orinasa alohan'ny faran'ny taona.
Azo heverina fa ny endrik'ity maodely mini iPad vaovao ity dia mitovy amin'ny tsipika iPad Pro vaovao natombok'i Apple sy ny tsipika iPhone, miaraka amin'ireo zoro mahitsy sy mety misy efijery 8,4 inch araka ny fanazavan'ilay mpandalina. Amin'ity tranga ity, ny mini iPad vaovao dia tsy hanampy ny bokotra boribory mahazatra eo amin'ny farany ambany, antenaina fa hanampy ilay rafitra mitovy hita ao amin'ny iPad Air, izany hoe, bokotra kely izay miasa ihany koa raha ny mamoha.
Ny maodely mini iPad amin'izao fotoana izao dia manomboka amin'ny vidiny € 449 ho an'ny maodely 64 GB ary 619 ho an'ny maodely fitehirizana 256 GB. Ilaina ny mijery raha marina ireo tsaho ireo, antenaina fa noho ny habetsaky ny vokatra ananantsika dia tsara kokoa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Kuo, miverena amin'ny làlan-kaleha ary amin'ny iPad mini amin'ity indray mitoraka ity